Argagixiso Ayuu La Kulmay: Guushii Khabib Nurmagomedov Oo Isu Rogtay Masraxiyad Siyaasadeed & Warbaahinta Reer Galbeedka Oo Dagaal Ku Haysa | Baahin Media
Argagixiso Ayuu La Kulmay: Guushii Khabib Nurmagomedov Oo Isu Rogtay Masraxiyad Siyaasadeed & Warbaahinta Reer Galbeedka Oo Dagaal Ku Haysa
Warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa Ingiriiska ayaa qaab siyaasadeed uga hor yimid feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib oo horraanta bishii hore dhulka la dhacay McGregor oo u dhashay Ireland.
Khabib oo dhalasho ahaan kasoo jeeda maamul goboleed muslimiintu ku badan yihiin oo ka tirsan dhul-weynaha Ruushka, ayaa waxa uu dhowaan booqasho ku yimid dalalka Islaamka qaarkood, gaar ahaan Imaaraadka iyo Turkiga, isagoo horena usoo maray Jeejniya oo abaal-marin qaali ah lagu guddoonsiiyey maalmo kaddib markii uu garaacay McGregor.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin u badan dacaayad siyaasadaysan ka qoray Khabib Nurmagomedov, waxaanu ku tilmaamay ciyaartoy guushiisii uga faa’iidaystay inuu la kulmo kali-taliyeyaal, argagixiso iyo dalal ku tunta xuquuqda Isnaanka.
Warbixintan dheer ee uu wargeysku qoray oo aanu soo turjunay, waxay u qornayd sidan:
Bil ayaa laga joogaa markii uu Khabib Nurmagomedov ku karbaashay kagana badiyey Conor McGregor ciyaartii Dagaalka miisaanka fudud ee UFC 229 si uu u sii xejisto horyaalnimada miisaanka fudud. In kastoo ciyaartay ay hadhaysay mashaqadii ka dhalatay – markii ciyaaryahanada labada dagaalyahan la kala socday ay isku dhaceen dagaal adagina dhex maray ka hor bilowgii kulanka, hadana taasi ma noqon mid Nurmagomedov ka hor istaagta inuu dunida ka noqdo qof can ah – isla markaana ka joojisa la kulanka qaar kamid ah hogaamiyeyaasha dunida ugu caansan.
Todobaadyadii aynu soo dhaafnay, Nurmagomedov wuxuu safaro aan la sii shaacin rasmina ahayn ku gaalaa bixiyey dhawr qaaradood oo dunida ah, si uu ugu dabaal daggo guushii horyaalnimadiisa. Safaradan oo isugu jiray qaar uu ku dhex safray dhawr maamul hoosaad oo isla Russia ah, ka hor intii aanu uga sii gudbin wadamada Bariga dhexe qaarkood. Intii uu socdaalkiisa ku gudo jiray, wuxuu kulamo kala duwan la yeeshay madaxweyneyaal uu kamid ahaa, ka Ruushka, Vladimir Putin, Madaxweynaha wadanka Chechniya – Ramzan Kadyrov, xubno kamid ah Qoyska boqortooyada Imaaraatka Carabta, iyo Madaxweynaha wadanka Turkey, Recep Tayyip Erdoğan.